Ndidinga ukuQesha igqwetha lokuvalwa kwam kwezindlu nomhlaba kwi-NJ? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Law Estate Real / Ndidinga ukuQesha igqwetha lokuvalwa kwam kwezindlu nomhlaba kwi-NJ?
Ndifumana lo mbuzo kaninzi, kwaye ngelixa ukuthengiswa kwezindlu nomhlaba ENew Jersey zibekwe emgangathweni kakhulu kwaye zisebenzisa ikhontrakthi efanayo yokuthenga, kukho imicimbi emininzi yezomthetho enokuthi ivele ukuba iarhente yakho yearhente ayizukukwazi ukuphatha kwaye ukumelwa ngokusemthethweni kunokuba lukhetho lobulumko noludingekayo.
Inkqubo yokuthenga okanye yokuthengisa indlu intsonkothile kwaye abantu abaninzi bakufumanisa kulula ukungena kuyo ngegqwetha labo. Kungamaphepha amakhulu kwaye ixesha amaxwebhu abuthathaka anokugqalwa ngokulula kwaye alibazise inkqubo okanye ade abulale wonke umsebenzi. Kunokuba luncedo ukuba nomntu onolwazi ngenkqubo yokukunceda ujongane nayo. Ezinye izahlulo zotshintshiselwano ezinje ngovavanyo, ukungabinakho ukuhlawula iindleko zokulungisa ezifunekayo, kunye nokugcina unxibelelwano nomthengisi ngegqwetha labo kwenzeka ngokukhawuleza kwaye igqwetha elinamava liya kubanakho ukujongana nabo ngexesha elifanelekileyo.
Nantsi eminye yemicimbi apho ukuba negqwetha kunokukusindisa kakhulu entloko kunye nemali kamva.
Indawo oyithengayo inabaqeshi abafuna ukugxotha abantu ukuze barente indawo kumhlobo. Ngaba oku kuya kusebenza?
Kuthekani ukuba abaqeshi baqesha iyunithi engekho mthethweni kumthengisi? Oku kungabuchaphazela njani amandla akho okugxotha okanye okuqesha kwixa elizayo?
Kuthekani ukuba ufuna ukurenta indlu ixesha elide, unyaka okanye emibini, ngaphambi kokuba uyithenge?
Udinga uncedo lokuphononongwa kunye nokuqonda isivumelwano sokusebenzisana kunye, okanye ikhontrakthi entsha yekhaya eyilelwe ngumqambi.
Uthenga ikhaya ngemboleko-mali yabucala kwisalamane okanye umhlobo.
Uthenga ipropathi ngokudibeneyo nabanye kwaye kufuneka wenze isivumelwano somthengi kunye nokubhala ukuba isihloko siza kubanjwa njani.
Ufuna ukufaka igatya lokunyusa eliza kukunika ilungelo lokudibana okanye lokugqitha nakuphi na ukhuphiswano olufunyanwa ngumthengisi.
Umthengisi ukuvumela ukuba uhambise ezinye izinto zakho kwigaraji yekhaya okanye igumbi elingaphantsi ngaphambi komhla wokuvala. Nobabini niza kufuna ukucacisa le nto ukuba yeyepropathi yenu nokuba ungawenza njani na umonakalo kuwo.
Ungathanda ukuba uqiniseke ukuba nawuphi na umqeshi okwangoku ekhaya uza kuphuma ngaphambi kokuba kuvalwe.
Unika umthengisi isivumelwano 'sokusebenzisa kunye nokuhlala'. Oku kuvumela umthengisi ukuba agcine ubunini bendlu ixesha elingaphaya kokuvalwa, kodwa ufuna ukuqinisekisa ukuba umthengisi uyakuhlawula irhafu yentengiso yelo xesha.
Imicimbi iza ingxelo yetayitile Njengomgaqo wokuhamba phakathi kwepropati oyithengileyo nendlu yommelwane, kodwa oku akuboniswanga kwisiza.
Kukho ulwandiso okanye ukungenelela kwindawo yepropathi engekho isihloko. Masithi ikhaya nithenga abamelwane bomnyango olandelayo kwaye umthengisi une-easement yomlomo evumela ukuba abamelwane bafumane indawo yokupaka iimoto zabo kwindlela yokuthengisa yomthengisi. Ukuba ungumthengi wasekhaya ungafuna ukwazi ukuba ayintoni kanye amalungelo ommelwane wakho, kunye nemida yala malungelo. Uya kufuna nokunciphisa esi sivumelwano sibhaliweyo.
Ngelixa oku kungekunge kuluhlu olupheleleyo lwezinto ezinokubakho ngexesha lokuthengiswa kwepropathi, kukunika umbono weengozi ezinokubakho ngokuthengiswa kunye nokuthengiswa kwepropathi kunye nokuba kutheni kunokuba licebo elihle ukuba ube semthethweni umelo lwentengiselwano. Ixabiso lokuba negqwetha lokuthengiswa kwezindlu elinokuthenjwa nelinamava kwicala lakho ukuze likuncede ekuqhubeni umsebenzi kwaye likwacebise kuwo onke amanqanaba otshintshiselwano lwakho kude kuphakama iindleko ezincinci zokuhlawula ukumelwa okusemthethweni kwezona zinto zininzi zentengiso zepropathi. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokuthenga okanye ukuthengisa kwekhaya lakho nceda ufowunele inkampani yam kwi844.533.3367 ukuze uthethe no igqwetha lezindlu Okanye u tyelele https://focusedlaw.com ukucwangcisa ixesha lokudibana kwi-intanethi.